Kiniiniyada ugu fiican suuqa - La cusbooneysiiyay Sebtember 2021 | Androidsis
Kiniiniyada ugu fiican
Jose Alfocea | | Kiniiniyada Android
Doorashada kiniin cusub ayaa ah wax aad ugu eg doorashada taleefanka gacanta ee cusub kaasoo beddeli doona xarunteenna hore. Suuqa ayaa ka buuxa noocyo badan iyo moodooyin badan, ka weyn iyo ka yar, midab iyo mid kale, leh awood aad u yar oo kayar iyo, dabcan, qiimayaal aad u kala duwan, laga bilaabo kiniinno ka yar boqol yuuro illaa kiniinno uu mileurista u baahan yahay mushaharka bisha, iyo xitaa kuwa leh. Laakiin sida casriga oo kale, fure u ah go'aankeena asal ahaan wuxuu ku saleysan yahay isticmaalka aan siineyno.
Sidii aan soo sheegnay, waxaan ku siin karnaa kiniinno adeegsiyo badan oo aan ku soo koobi karno laba nooc oo ballaaran: isticmaalka waxyaabaha (ka dhex soco internetka, aqriso, daawato fiidiyowyada, dhageyso muusikada, iwm.) iyo shaqooyin xirfadeed, taas oo ah, u adeegso inay u shaqeeyaan sidii inay yihiin kombuyuutarro. Waxay ku xirnaan doontaa haddii aan dooranno hal qalab ama mid kale, maadaama aan u baahanahay in badan oo astaamaha ah oo aan aad ugu badnaan kuwa kale. Laga bilaabo qaddarinta in isticmaalka ugu horreeya (isticmaalka nuxurka) lagu samayn karo kiniin kasta, waxaan diirada saari doonaa xulkeena kaniiniyada ugu fiican suuqa qaabkooda labaad maamulaha. Ma bilaabi karnaa?
1 9-ka kiniin ee ugufiican maanta
1.1 Buugga Lenovo Yoga
1.4 Google Pixel C
1.5 Huawei MediaPad M3
1.6 BQ Aquaris M10
1.7 Nvidia Shield Tablet
1.8 Microsoft oogada 4 Pro
1.9 iPad Pro
2 Maxaan xisaabta ku dareynaa si aan u dooranno mid ka mid ah kaniiniyada ugu fiican
9-ka kiniin ee ugufiican maanta
Sidii aan horeyba u tilmaamnay, waxaan diirada saari doonaa xulashada kiniiniyada ugu fiican suuqa ee ku saabsan adeegsiga xirfada leh, laakiin aan dayacno waqtiyada firaaqada iyo madadaalada. Dhamaantood waxaan daawan karnaa fiidiyowyada YouTube-ka, hubin karnaa, soo diri karnaa oo aan soo diri karnaa emayllo, waxaan dhegeysan karnaa liistadayada ugu xiisaha badan ee 'Spotify', waxaan kula xiriiri karnaa Telegram iyo waxyaabo kale oo badan. Si kastaba ha noqotee, ma awoodi doonno inaan la shaqeyno dhammaantood, ama ugu yaraan, ma awoodi doonno inaan ku qabanno sida ugu raaxada iyo wax soo saarka badan ee suurtogalka ah. Sidaa darteed, markii la sameynayo xulashadan, Waxaan la socon doonnaa dhinacyo la mid ah kuwa aan xisaabta ku dareyno marka aan iibsaneyno desktop ama laptop cusub: RAM, processor-ka, cabirka iyo tayada shaashadda, cabirka iyo culeyska qalabka laftiisa, qiimahiisa lacagta, iyo wixii la mid ah.
Ugu dambeyntiina, ka hor intaanan ku tusin xulkeenna, ma rabno inaan seegno fursadda aan ku xusuusanno taas, sida casriga iyo kombuyuutarrada, kaniiniga ugu fiican ayaa noqon doona midka sida ugu wanaagsan u daboolaya baahiyahaaga iyo waxyaabaha aad ka rajeynayso, maahan midka aan annaga ama qof kale kuu tilmaameyno, haddaba u qaado xulashada soo socota oo keliya soo-jeedin uun, marka lagu daro, waan cusbooneysiin doonnaa waqtiga kadib si ay had iyo jeer ugu adeegto hage wanaagsan.
Buugga Lenovo Yoga
Waxaan ku bilaabaynaa mid ka mid ah taxane kiniinno ah oo helay sumcadda iyo haybadda ugu weyn muddooyinkii ugu dambeeyay. Gaar ahaan waxaan tixraacnaa Buugga Lenovo Yoga, kiniin ah ku habboon labadaba in la isticmaalo nuxurka iyo in la shaqeeyo ama daraasado la sameeyo. Waa aalad aad u socota (waxaa la soo bandhigay bishii Sebtember ee sanadkii hore) runtiina waa nooc ka mid ah isku dhafan inta udhaxeysa kiniinka iyo laptop-ka. Waxay leedahay shaashad 10-inji ah iyo kumbuyuutar taabasho oo aad sidoo kale u isticmaali karto sida dusha oo aad wax ku qori karto gacanta si qoraaladaada ama sawiradaadu ay isla markiiba u digtoroobaan. Maaddaama ay tahay nidaam hawlgal waxay ku timaaddaa Android 6.0 Marsmallow laakiin sidoo kale waxaad leedahay nooc leh Windows 10.
Waxaa ka mid ah qeexitaankeeda farsamo ee ugu muhiimsan Intel Atom x5-Z8550 2.4 GHz processor oo uu weheliyo 4 GB ee RAM LPDDR3, 64 GB oo kaydinta iyo kaarka sawirada ee Intel HD. Marka laga hadlayo qiimaheeda, waxaad ka heli kartaa wixii ku saabsan 435 euros.
Shirkadda Koonfurta Kuuriya ee Samsung kama maqnaan karo xulashada kiniinnada ugu fiican kan cusub Galaxy Tab S3 kaas oo lagu soo bandhigay MWC 2017 bishii Febraayo. Waxay leedahay a 9,7-inji Super AMOLED shaashad oo leh xallinta 1536 x 2048 iyo qaabka 4: 3. Waxqabadkeeda waxaa gacanta ku haya processor-ka Snapdragon 820 oo uu weheliyo Adreno 530 GPU, 4 GB oo RAM ah, 32 GB oo keyd ah iyo isku xirnaan LTE ikhtiyaari ah.
Sidoo kale, waxaa ka mid ah S-Pen iyo afar ku hadla oo leh shareero tayo sare leh oo uu saxeexay AKG, kuna habboon dhageysiga muusikada aad jeceshahay inta aad shaqeyneyso.
Sony waa shirkad kale oo ka mid ah shirkadaha tiknoolajiyadda waxayna ku tusaysaa qaybta kiniinka ah tan Xperia Z4 Tablet, qalab cabirkiisu yahay shaashad aad ugu habboon shaqada iyo isticmaalka waxyaabaha la isticmaalo, 10,1 inches. Iyadoo la adeegsanayo 2560 x 1600. Gudaha waxaa ku jira processor sideed-awood leh oo xoog leh 1,5 GHz oo ay la socdaan 3 GB ee RAM iyo keydinta gudaha oo laga bilaabo 16 GB (taas oo aan kugula talinaynin iyada oo aan ku filnayn). Waxa kale oo ay u taagan tahay la-socodkiisa maaddaama oo keliya dhumucdiisu tahay 6,1 mm (oo ka yar taleefannada casriga ah) oo miisaankeedu ka yar yahay afar boqol oo garaam. Mana iska indho tiri karno madaxbanaanideeda cajiibka ah mahadsanid a 6.000 mAh baytariga, ama kanaga ciidda iyo u adkaysiga biyaha, sida qaybaha kale ee Xperia, oo wata shahaadada IP68.
Mid kale oo kaniiniyada ugu fiican ah ayaa ah nooca Google pixel C, kiniin leh shaashad 10,2 inches iyo xallinta 2560 x 1800 pixels, oo u weyn cabirka daraasadaha iyo shaqada labadaba ama inaad ku raaxaysato taxanaha aad ugu jeceshahay oo ay weheliso tayada codka weyn.
Sidoo kale waa kiniin leh waxqabad aad u fiican oo ay ka mid yihiin 3 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah gudaha si aad ugu dhaqaaqdo nooca 'Android 6 Marshmallow' kaas oo uu ku yimid heer.
Shirkadda soo saarta taleefannada casriga ah ee Shiinaha ayaa na siisa mid ka mid ah kaniiniyada Shiinaha ugu fiican: waa Huawei MediaPad M3 Lite 10, kiniin leh naqshad aad u qurux badan oo taxaddar leh oo leh shaashadda IPS ee 10,1 inji Full HD gudaheeda oo aan kaheleyno 8940 GHz MSM1.4 sideed-processor-ka processor-ka ah oo ay soo saartay shirkadda Qualcomm oo ay weheliso 3GB RAM, keyd 32GB ah gudaha, 6.600 mAh baytariga, isku xirnaanta LTE y Android 7 Nougat taxane ah Iyo dhamaanteed in ka yar 300 euro. Oggol in aysan ahayn kaniiniga ugu awoodda badan suuqa, laakiin qiimaha lacagtu waa ku dhowaad in aan laga adkaan karin.
Ma jecli inaanu xulno nuucaan oo kale Isbaanish la'aan, mar labaadna waa shirkadda BQ ee ku soo dhex dhuunta soo jeedintan ee kiniiniyada wanaagsan ee moodelkeeda leh BQ Aquaris M10. Waxaan hor joognaa kiniin leh shaashad 10,1 inji Full HD, ugu fiican cabbirka iyo tayada labadaba shaqada iyo isticmaalka waxyaabaha.
Gudaha waxaan ka helnaa processor afar geesle ah oo loo yaqaan 'Mediatek MC88110 processor' oo uu weheliyo 2 GB oo RAM ah iyo 16 GB oo keyd ah gudaha, isku xirnaanta WiFi iyo kaarka sawirada ee Mali T720 MP2.
Laakiin kiniinkan BQ wuxuu si gaar ah u xusi karaa madax-bannaanidiisa, tayada codkeeda weyn, iyo qiimaheeda oo ka yar laba boqol oo euro.
Haddii waxa aad runtii jeceshahay ay ciyaarayaan, ma joojin kartid tixgelinta tan Wax alaab ah lama helin. oo ay soo saartay soo saaraha kaarka sawir gacmeedka caanka ah, oo ka mid ah tilmaamahiisa farsamo ee aan ku muujineyno 8 inch screen IPS (1920 x 1200) oo leh 2,2 GHz ARM Cortex processor oo uu weheliyo 2GB RAM, 32GB ROM, NVIDIA Tegra K1 kaarka sawirada, isku xirnaanta WiFi iyo nidaamka hawlgalka Android.
Microsoft oogada 4 Pro
In kasta oo aan ku jirno Androidsis oo halkan waxaan si gaar ah ugu fiirsanaa aaladaha Android, waa in aynaan ku xirmin xulashooyinka kale sidaa darteedna labada talo ee soo socda. Waxaan ku bilaabaynaa Qalabka Pro 4 laga bilaabo Microsoft, oo ah kiniin dhab ahaantii ka badan kumbuyuutar kumbuyuutar ah. Waxay isku dhafan tahay wax weyn 12,3 inch screen iyo processor Intel Core i5 ah oo awood badan oo ay weheliyaan 4 GB RAM, 128 GB kaydinta gudaha SSD iyo Windows 10 Pro sida nidaamka qalliinka. Waxaa sidoo kale lagu heli karaa processor Intel Core M iyo 256 iyo 512 GB fursado kaydinta. Xaaladaha oo dhan waxay la yimaadaan qalin lagu daray iyo qiimahiisu wuxuu dhaafayaa 800 oo euro. Shaqada degdegga ah, waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican.
In kastoo qaar idinka mid ah ay doonayaan inay "ixumeeyaan", waxaan khatar ugu jiraa inaan ku taliyo ka mid ah kaniiniyada ugu fiican iPad Pro ka Apple, labadaba noocyadiisa 9,7 "iyo 10,5" iyo, gaar ahaan, 12,9 ". Iyada oo nidaamka qalliinka macruufka 10 Waxay leedahay processor awood leh waxayna ku habboon tahay daawashada waxyaabaha maqal-maqalka ah iyada oo ay ugu wacan tahay muuqaalka isha iyo iyaga afar ku hadla, iyo waliba in si xoog leh loo shaqeeyo. Dabcan, waa inaad ku raacdaa kumbuyuutar iyo qalin, gaar ahaan haddii aad rabto inaad soo bandhigto dhinacaaga ugu hal abuurka badan. Qiimaheedu wuxuu ka bilaabmayaa 729 euro, oo ay tahay inaad ku darto kumbuyuutar iyo qalin haddii aad rabto khibrad dhammaystiran.
Maxaan xisaabta ku dareynaa si aan u dooranno mid ka mid ah kaniiniyada ugu fiican
Sidii aan horeyba uugu dhawaaqnay bilowga, xulashada mid ka mid ah kaniiniyada ugu fiican maahan hawl fudud. Waxaa cad in inteena badan qiimaheena waa lagu xadidi doonaa Si kastaba ha noqotee, mar haddii aan dejinay miisaaniyad iyo xad aan ku socon karno, waa inaan caddeynno maxay tahay isticmaalka aan siin doonno. Marka la eego guud ahaan:
Haddii aan ku koobnaan doonno isticmaalka "caadiga ah", dooni mayno awood weyn; Si loo maareeyo e-maylkeena, u fiirso internetka, u akhri, u fiirso fiidiyowyada, u dhageyso muusikada ama u ciyaaro mararka qaarkood, dhexda dhexe iyo xitaa kaniiniga hooseeya ayaa kugu filnaan doona, in kastoo, sida iska cad, ay had iyo jeer ka fiicnaan laheyd lahaanshaha muuqaal wanaagsan iyo tayo cod leh .
Haddii aan u isticmaali doonno inaan ku ciyaarnoMarka waxaan u baahanahay awood, waxqabad, sawir gacmeedyo wanaagsan, sidaa darteed Nvidia Shield wuxuu noqon karaa ikhtiyaarka ugu habboon, marka loo eego waayo aragnimadiisa si hufan ee farsamaynta shaxanka.
Y haddii waxa aan dooneyno ay tahay in laptop-ka lagu beddelo kaniiniga si uu u shaqeeyo, si dhab ah u tixgaliso qalabka dibedda (qalinka iyo kiiboodhka), hubi inaad haysato waxqabadka iyo awoodda aad ugu beddeli karto si siman codsiyada, fiiro gaar ahna u yeelo tayada iyo cabbirka shaashadda - saacado badan kolba shaashadda yar horteeda ma aha oo keliya mid aan raaxo lahayn , laakiin waxay saameyn ku yeelan doontaa caafimaadkaaga aragga.
Miyaad isticmaashaa kiniiniyada aan dooranay maalin kasta mise waxaad doorbideysaa nooc kale? Noo sheeg talooyinkaaga oo nala soco maxaa yeelay waan cusbooneysiin doonnaa xulkeenna dhowaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Kiniiniyada Android » Kiniiniyada ugu fiican
Xanta Android dijo
Waad mahadsantahay waxbadan waan jeclahay
Ku jawaab Xanta Android
Waxaan raadinayaa 10-inch oo dhex-dhexaad ah, waxaan u isticmaalaa oo keliya internetka, boostada, akhriska iyo xoogaa dalab ah.
Waxa aan doonayo waa inay ahaato mid deg deg ah oo nolol batteri fiican leh.
Miisaaniyaddaydu way dhaaftay 300.
Kuwee ayaad igula talin lahayd?
Salaan iyo mahadsanid!
Samsung Galaxy J7 2016 ayaa loo cusbooneysiin doonaa Android 7.0 Nougat
Sony Xperia XA1 Ultra hadda waxaa laga heli karaa Hindiya